ဥရောပချန်ပီယံအတွက်လမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဥရောပချန်ပီယံအတွက်လမ်း
အင်္ဂါနေ့ ည ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်များမှာတော့ ၊ လူကြိုက်များတဲ့ ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်းဟာ သရေ ဘဲ ကစားနိုင်ခဲ့သလို ၊ အခြေအနေဆိုးနေတဲ့ ချဲဆီးအသင်းဟာလဲ ဆက်လက် အခြေအနေဆိုးခဲ့ပါတယ် ။ သည်ကနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ည(သို့ မဟုတ်)ကြာသပတေးနံနက်မှာ ကန်ကြမယ့် ပွဲများနဲ့ အချိန်များမှာ
1.30 မန်စီးတီး – ပေါ်တို (ပထမကျော့ ပေါ်တို ၁-၂ မန်စီးတီး) (ပေါ်တိုသရေကန်နိုင်သည်)
2.15 ဘေဆဲ – ဘိုင်ယန်မြူးနစ်
2.15 မာဆေး – အင်တာမီလန်
00.00 ဆီနာ(၁၇) – ကာတားနီးယား(၁၆) = ဆီနာအနိုင်သေချာပါတယ် ။
ဘေဆဲ – ဘိုင်ယန်
ဘေဆဲ အသင်း အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ငါးပွဲမှာ သရေ ၊ နိုင် ၊ နိုင် ၊ နိုင် ၊ နိုင်
ဘိုင်ယန် အသင်း အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ငါးပွဲမှာ သရေ ၊ နိုင် ၊ နိုင် ၊ သရေ ၊ နိုင်
ဘေဆဲအသင်း၏ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအတွင်း အိမ်ကွင်း ၃ပွဲကန်ခဲ့သော ရလဒ်များမှာ
2011.12.7 ဘေဆဲ ၂-၁ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်
2011.10.18 ဘေဆဲ ၀-၂ ဘင်ဖီကာ
2011.9.14 ဘေဆဲ ၂-၁ အိုတီလူ
ဘိုင်ယန်အသင်း၏ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအတွင်း အဝေးကွင်း ၃ပွဲကန်ခဲ့သောရလဒ်များမှာ
2011.12.7 မန်စီးတီး ၂-၀ ဘိုင်ယန်
2011.10.18 နာပိုလီ ၁-၁ ဘိုင်ယန်
2011.9.14 ဗီလာရီးရဲ ၀-၂ ဘိုင်ယန်
နောက် Steinhofer, Abraham, Dragovic, J.Park
လယ် Shaqiri, Huggel, G.Xhaka, F.Frei
ရှေ့Streller, A.Frei
နောက် Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm
လယ် Luiz Gustavo, Alaba
လယ် Muller, Kroos, Ribery
ရှေ့Gomez
ယမန်နှစ် ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်တွင် ဘေဆဲကွင်းတွင် ဘိုင်ယန် ကစားခဲ့ဖူးပြီး ၂-၁ ဖြင့် နိုင်ခဲ့သည် ။
ယခုပွဲအတွက် ဖွင့်လှစ်သောဈေးမှာ ဘိုင်ယန် တစ်ဂိုးသွင်းလျှင် ၃၀% မြတ်မည်ဖြစ်ပြီး ဂိုးပေါင်းဈေးမှာ သုံးဂိုးသွင်းလျှင် ၇၀% ခန့် အမြတ်ရမည် ဖြစ်သည် ။
ယခုပွဲမတိုင်ခင် ဘိုင်ယန်ကန်ခဲ့သော ငါးပွဲတွင် ဂျာမန်ပိုကယ်ဖလားတစ်ပွဲဘဲ ဘိုင်ယန် ကြေးအောင်ခဲ့ပြီး ၊ ကျန်၎ပွဲတွင် အောက်စားခဲ့သည် ကို တွေ့ ရသည် ။ လက်ရှိအချိန်တွင် လည်း ဘွန်ဒက်လီဂါ တန်းဆင်းဇုန်နားမှ ဖရိုင်းဘတ် ကို ဂိုးမရှိသရေသာ ကစားနိုင်ခဲ့သည် ကို တွေ့ ရသည် ။
ဘေဆဲအသင်းမှာ နောက်ဆုံးကစားခဲ့သော ငါးပွဲစလုံးတွင် ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သည် ကို တွေ့ ရပြီး ငါးပွဲစလုံးတွင် ရဂိုး၈ ပေးဂိုး၎ သာ ရှိခဲ့သည် ကို တွေ့ ရသည် ။
ယခုပွဲတွင် သရေဆိုလျှင် အပြည့်အဝ ပျော်ရွှင်ရမည့် / အိမ်ကွင်းဆိုလျှင် ခြေစွမ်းပိုကောင်းသည့် “““ ဘေဆဲ ””” ကိုသာ ရွေးခြယ်ထားချင်ပါသည် ။
မာဆေး – အင်တာမီလန်
မာဆေး အခုပွဲမကန်ခင်ကစားခဲ့တဲ့ငါးပွဲမှာ သရေ ၊ နိုင် ၊ သရေ ၊ နိုင် ၊ နိုင်
အင်တာမီလန် အခုပွဲမကန်ခင်ကစားခဲ့တဲ့ငါးပွဲမှာ ရှုံး ၊ ရှုံး ၊ ရှုံး ၊ သရေ ၊ ရှုံး
မာဆေး အသင်း၏ အုပ်စုအတွင်းကစားခဲ့သော အိမ်ကွင်းရလဒ်များမှာ
2011.11.23 မာဆေး ၀-၁ အိုလံပီယာကော့
2011.10.19 မာဆေး ၀-၁ အာဆင်နယ်
2011.9.28 မာဆေး ၃-၀ ဒေါ့မန်
အင်တာမီလန် ၏ အုပ်စုအတွင်းကစားခဲ့သော အဝေးကွင်းရလဒ်များမှာ
2011.11.22 ထရာဇွန်စပေါ ၁-၁ အင်တာမီလန်
2011.10.18 လိုင်လီ ၀-၁ အင်တာမီလန်
2011.9.27 စီအက်စ်ကေအေ ၂-၃ အင်တာမီလန်
မာဆေး အသင်း၏ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကစားသမားများမှာ
နောက် Azpilicueta, Diawara, Nkoulou, Morel
လယ် Kabore, Cheyrou
လယ် Amalfitano, Valbuena, A. Ayew
ရှေ့Brandao
အင်တာမီလန် အသင်း၏ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကစားသမားများမှာ
နောက် Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo
လယ် Zanetti, Palombo, Cambiasso, Poli
ရှေ့Milito
သည်ပွဲအတွက် နှစ်သင်းလုံးနည်းပြများအတွက် အမှတ်ရစရာမှာ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်တွင် ဒက်ချန့် ကိုင်သော မိုနာကို အသင်းက ရေနာရီ ကိုင်သော ချဲဆီး အသင်း ကို အနိုင်ကစားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။
လက်ရှိအချိန်တွင် မာဆေး နောက်ဆုံးခဲ့သော ပြင်သစ်အမှတ်ပေးပွဲစဉ် ၁၅ ပွဲ တွင် ၁၂ ပွဲ နိုင်ထားသည် အထိ ခြေစွမ်းတက်နေသည် ။ အင်တာမီလန် အသင်း ကတော့ နောက်ဆုံးငါးပွဲတွင် နိုင်ပွဲလုံးဝ မရှိသည် အထိ ခြေစွမ်းကျနေသည် ။
ဈေးအနေအထားအရ သရေ ဆိုလျှင် မာဆေး ၇၀% ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည် ။
အင်တာမီလန်အတွက် အမှတ်ရစရာမှာ ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၁ တွင် အင်တာမီလန် သို့ ရာရေနာရီ ကိုင်တွယ်လိုက်ကတဲက ချန်ပီယံလိဂ်တွင် အိမ်ကွင်း/အဝေးကွင်းမရွေး ရလဒ်များကောင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ။ ယခုပွဲတွင် ဖွင့်သော ဈေးအနေအထားအရ အင်တာမီလန် ကို ခေါ်ဈေးဖြစ်နေသည် ။
ယခုပွဲအတွက် အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းထုတ်ပြလာမည့် “““ မာဆေး ””” ကိုသာ ရွေးခြယ်ချင်ပါသည် ။
……. အားလုံးဘဲ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ပါစေ …….
မာဆေးလည်း ကြိုက်တယ် …
အင်တာကိုလည်း ခိုက်တယ် …
သို့ပေသိ မာဆေး အိမ်ကွင်းဆိုတော့ … မာဆေး ကပ်နိုင်ဖို့ များသလို၊ သရေဆိုလည်း မျှတတဲ့ အဖြေတစ်ခုပါပဲ … ။
ခပ်တည်တည်နှင့် ဝင်မန့်သွားပါ၏ ….
အခုလို ကွန်မင့်ပေးတဲ့အတွက် အထူးဘဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျား ။
အာ .. ကိုပေကလည်း ..
ကျေးဇူးတင်စရာ လူတွေမှ မဟုတ်တာ ..
အဟဲ … ဒါနဲ့ ကိုပေ နေကောင်းသွားပြီလားဗျ …
ဒီနေ့ တောင် ပေါက်ဖော်က “မောင်ပေ၊ မြန်မြန်လာခေါ်ပါ” ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို တင်ထားသေးတယ် …
အခု ပို့ ပေးလိုက်ပြီလေ
မြတ်မန္တာထွန်းကားနဲ့တင်ပေးလိုက်တယ်.
ဟေး ကပေ – နေကန်း သွားပြီလား။
မြန်မြန် နေကောင်းပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။
အခုလို မေတ္တာစေတနာ နဲ့ သတိတရ မေးတဲ့အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ် ခင်ဗျာ
ကျွန်တော် မောင်ပေ ဘာမှ မဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား ။
မန်စီးတီး အကြံအကြီး ကြီး … ပေါ်တို ပိုတော်…။ ပေါ်တို တဂိုးအသာနဲ့ နိုင်မယ်…
2.15 ဘေဆဲ ၁ – ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ၃ ( ဘေဆဲ ရွှေဘဲ ရွှဲဘေ… ဘိုင်ယန် ပြိုင်စံ နိုင်ကန်)
2.15 မာဆေး ၁ – အင်တာမီလန် ၂(မာဆေး မေးဆာ … အင်တာ မြင်သာ)
ကပေ နေမကောင်းဘူးဆိုလို့ နေ့တိုင်း သတင်းစာစောင့်ဖတ်နေတာ အခုတော့ ပြန်ပေါ်လာတော့ ဆက်ဖတ်စရာ လိုတော့ဘူးပေါ့…။ နင် အားရော ရှိသေးရဲ့လား..။ ကြက်ဥနဲ့ပျားရည် နေ့တိုင်းသောက်နော်။ တော်ကြာ အားပြတ်ပြီး ပြန်လဲသွားအုံးမယ်။
ကွက်တိပဲ..ဆာကမ်စီးရှင်း ကုန်ကျစရိတ်လေးပြန်ရပြီ ပေါ့နော်
ဒီည ပွဲလေးတွေ စောစောတင်ပီး.. မန်ယူပွဲလေးလဲ ပါအောင်လုပ်ပါဗျ
အခုက စပြီး ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။
ကိုပေ့ ကျေးဇူး မာဆေးနဲ့ရူးဖူးပီ ၊ မာဆေးကို မထူမပါးလေးကစ်လိုက်မိတယ်။